SAWIRRO:-DFS iyo Talyaaniga oo heshiis Deyn Cafin ah kala saxiixday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa DowladdaTalyaaniga la saxiixatay heshiis Deyn cafin ah oo daba socda go’aankii wadamada Paris Club ee Soomaaliya looga cafiyay 1.4 Bilyan Sanadkii tagay 2020-kii.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa heshiiskan la saxiixday safiirka Dowladda Talyaaniga u jogga Soomaaliya Mudane Alberto Vecchi oo uu sheegay inuu si gaar kagala shaqeeya saxiixa maanta suurta galay.
“Maanta waxa aan Dowladda Taliyaaniga la saxiixanay heshiis Deyn_Cafin ah oo daba socda go’aankii wadamada Paris Club ee Soomaaliya looga cafiyay 1.4 Bilyan Sanadkii tagay 2020-kii” ayuu yiri Wasiir Beyle oo Qoraal soo saaray.
Ugu dambeyn Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ayaa u mahadceliyay Safiirka Dowladda Italy u jooga dalka Alberto Vecchi oo si gaar ah dowladda ugala shaqeeyay Saxiixa maanta.
Madaxweynaha Jubbaland oo kulan gaar ah la qaatay Donald Yamamoto